आगो ओकल्दै नेपाली ब्याट्सम्यान, अचानक कसरी भयो कायाकल्प ? – Nepal Press
त्रिकोणात्मक टि-२० सिरिज
आगो ओकल्दै नेपाली ब्याट्सम्यान, अचानक कसरी भयो कायाकल्प ?
२०७८ वैशाख ९ गते २०:४७
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको परम्परागत टाउकोदुखाइ हो ब्याटिङ । ब्याटिङको कमजोर स्तरले नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको माथिल्लो स्तरमा उक्लिन रोकिरहेको छ ।
तर, हाल काठमाडौंमा जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने ब्याट्सम्यानहरुको अर्कै रुप देखिन्छ । नेपालले खेलेका ४ वटै म्याचमा नेपालको ब्याटिङ जम्जमाएको छ । यसअघि सम्भवत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली ब्याट्सम्यानले यसरी खुलेर खेलेका थिएनन् ।
यो सिरिजमा नेपालसँग नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नेपाल र नेदरल्यान्ड्सले शनिबार फाइनल खेल्ने तय भइसकेको छ । नेपालले खेलेका चारमध्ये तीन म्याच नेपालका लागि फुलको थुंगामा हिँडेजस्तो भयो । नेदरल्यान्ड्ससँगको एउटा म्याचमा साँघुरो अन्तरले पराजित भयो । यी चारवटै म्याचको प्रदर्शनमा नेपालको ब्याटिङ अब्बल स्तरको थियो ।
अघिल्ला दुईवटा म्याचमा नेपालले दोस्रो ब्याटिङ गर्दै समान ९-९ विकेटको जित हासिल गर्यो । पछिल्ला दुई म्याचमा पहिलो ब्याटिङ गर्दै नेपालले रनको पहाड खडा गर्न सफल भयो । नेपालले प्रत्येक म्याचमा छक्काको वर्षा गरिरहेको छ । आज एउटै खेलमा नेपालले १९ छक्का प्रहार गर्यो, जुन सर्वाधिक छक्काको विश्वरेकर्डमा छैटौं धेरै हो ।
नेपालले यो प्रतियिोगिताअघि एउटा टि-२० म्याचमा मात्रै दुई सयको आँकडा पार गरेको थियो, त्यो पनि भुटानजस्तो कमजोर टोलीविरुद्ध । तर, यही प्रतियोगितामा नेपालले दुईपटक २ सय रनको आँकडा पार गरेको छ । कुनै पनि स्तरको टि–२० क्रिकेटमा २ सयभन्दा माथिको स्कोरलाई भयानक मानिन्छ । सामान्यतया एक सय ५० स्कोर बनाउन पनि धौधौ हुने नेपालले लगालग दुई सय रन कटाउनु ब्याटिङको ‘कायाकल्प’ नै हो ।
कसको योगदान कति ?
नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले डेब्यू प्रतियोगितामा नै लगातार ३ वटा अर्धसतक प्रहार गर्दै किर्तिमान कायम गरे । उनी यो प्रतियोगितामा हालसम्मका उच्च स्कोरर हुन् ।
कुशलको रन स्कोरिङ मात्र नभएर स्ट्राइक रेट पनि राम्रो छ । ६७ को औसत तथा १३८ भन्दा बढीको स्ट्राइक रेटमा उनको ब्याटबाट २०१ रन निस्किसकेको छ । उनले १६ छक्का र १३ चौका प्रहार गरेका छन् ।
अर्का ओपनर आसिफ शेखले पनि एक अर्धसतकसहित ४ खेलमा १३८. रन बनाएका छन् । सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यानका सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेका उनले ४६ को औसत र १३४ को स्ट्राइक रेट कायम गरेका छन् ।
ओपनर जोडीपछि शानदार फर्ममा देखिएका ब्याट्सम्यान हुन् दिपेन्द्रसिंह ऐरी । तीन म्याचमा ९९ रन जोडेका ऐरीको स्ट्राइक रेट झण्डै २०० छ भने औसत ५० को नजिक छ । विष्फोटक अन्दाजमा खेलिरहेका उनले एक अर्धसतक बनाएका छन् ।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले धेरै ब्याटिङको मौका नपाए पनि परिस्थिति अनुसार आक्रामक खेल्दै टिमलाई योगदान दिएका छन् । उनले ३ इनिङमा १७२ को स्ट्राइक रेट र ३७ औसत कायम गर्दै ८१ रन बटुलेका छन् ।
आज मलेसियाविरुद्धको खेलमा नेपालका अलराउन्डर करण केसीले ब्याटिङको ‘पागलपन’ देखाए । उनी किर्तिमानी अर्धसतकको नजिक पुगेका थिए, तर ४५ रनमा आउट हुन पुगे । ४५ रन बनाउँदा ७ छक्का प्रहार गरेका करणले तीन रन मात्रै दौडिएर लिएका थिए ।
नेपालका अन्य ब्याट्सम्यानहरुले खासै ब्याटिङको मौका पाएका छैनन् ।
प्रशिक्षकको प्रभाव र ब्याटिङमैत्री पीच
यो प्रतियोगिताअघि नेपालको चिन्ता भनेकै ब्याटिङ थियो । ओपनिङ कसले गर्ने भन्ने टुंगो थिएन ।
कोरोनाका कारण लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट नखेलेका ब्याट्सम्यानहरु यसै पनि दवावमा थिए । नेपालको ब्याटिङका मेरुदण्ड पूर्वकप्तान पारस खड्काले म्याचको अघिल्लो दिन चोटका कारण सिरिज गुमाउन पुगे । त्यसल नेपालको मनोबल थप खस्केको थियो ।
अन्तिम समयमा नेपालले दुई डेब्यूव्वाइ कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखलाई ओपनरको रुपमा उतार्यो । अनुभवी ब्याट्सम्यानलाई पछाडि राखेर दुई युवालाई खुलेर पाखुरा चलाउने अख्तियारीसहित ओपनिङमा पठाउने निर्णय अन्ततः नेपालका लागि ‘मास्टरस्ट्रोक’ सावित भयो । ओपनिङ जोडीले ‘टोन सेट’ गरेपछि अरु ब्याट्सम्यानले त्यसलाई पछ्याएका छन् ।
चारवटा म्याचमा उच्चस्तरको ब्याटिङ हेरिसकेपछि धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न हो नेपालको ब्याटिङमा एकाएक कसरी चमत्कारिक सुधार भयो ? यसको एउटै कारण नहुन सक्छ । नेपाली ब्याट्सम्यानको फरक माइन्ड सेट, सहज पिच, विपक्षीको मामुली बलिङका मेलजोलका रुपमा यो परिणामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि नेपाली ब्याट्सम्यानहरु खुलेर सट हान्न हिच्किचाउँथे । विकेटमा टिक्ने कुरामा मात्रै उनीहरुको बढी ध्यान रहन्थ्यो । प्रशिक्षकले पनि ‘विकेट खेर नफाल्न’ बढी जोड दिने गर्थे । तर, नयाँ प्रशिक्षकका रुपमा डेव वाटमोर आएपछि ब्याटिङ रणनीति फेरिएको देखिन्छ ।
अर्काे कारण भनेको पिच पनि हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानको पीच आमरुपमा ब्याटिङ फ्रेन्डली नै मानिन्छ । यद्यपि, विगतमा त्यहाँको पीचले स्पिनरलाई केही सपोर्ट गथ्र्यो । तर, यस प्रतियोगितामा स्पिनरहरुले पनि मज्जाले रन खाइरहेका छन् । सन्दिप लामिछानेसमेत महंगो सावित भएका छन् । नेपालले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध २ सय ६ रनको स्कोर पनि रक्षा गर्न नसक्नुले पिचमा बलरहरुका लागि केही पनि छैन भन्ने मान्न सकिन्छ ।
तेस्रो कारण भनेको विपक्षीको बलिङ पनि धारिलो देखिएको छैन । नेदरल्यान्ड्स बलियो टिम भए पनि उसको ‘स्ट्रेन्थ’ बलिङभन्दा ब्याटिङ हो । यो प्रतियोगितामा नेदरल्यान्ड्सका केही फस्र्ट च्वाइस बलरहरु अनुपस्थित छन् । त्यसको फाइदा नेपालले उठाएको छ । मलेसिया यसै पनि नेपालभन्दा कमजोर टिम हो ।
फाइनलमा के होला ?
नेपाल र नेदरल्यान्ड्स पर्सी फाइनल भिड्दैछन् । त्रिविको पिचले यदि यही स्वभाव देखाइरह्यो भने ‘हाइस्कोरिङ’ फाइनल हुन सक्छ ।
फाइनलअघिको समग्र प्रदर्शन नेदरल्यान्ड्सभन्दा नेपालको राम्रो छ । तर, हेड टु हेडमा हेर्दा दुवैले एक–अर्कालाई हराएका छन् । पहिलो म्याचमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई ९ विकेटले हराएको थियो भने अर्कोमा नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई ३ विकेटले जितेको थियो ।
तर, यी नतिजाहरुले फाइनलमा खासै अर्थ राख्दैनन् । फाइनल जित्न फाइनलमै राम्रो खेल्नुपर्छ । मैदानमा जाँदा नेपालको मनोबल उच्च हुनेछ, तर खराब सुरुवात भयो भने तुरुन्तै दवावमा आइहाल्छ । यदि नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई हराएर फाइनल जित्यो भने त्यसले प्रशिक्षक वाटमोरको सुखद सुरुवात सुनिश्चित गर्ने छ ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ९ गते २०:४७
एएफसी कप छनोटअघि नेपालले कतारमा दुई देशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने
वरियतामा नेपालभन्दा पछाडि रहेको नामिबियाले जित्यो जिम्बावेमाथि टी-२० शृंखला
यूरोपका शीर्ष घरेलु फुटबलमा चम्किएका एसियाली खेलाडी
नेपाल टी-२० खेल्ने ६ टिमको नाम सार्वजनिक
गुजरात टाइटन्स आईपीएलको फाइनलमा
घरपालुवा बिरालो कुटेको आरोपमा वेस्ट हामका डिफेन्डर जुमा दोषी ठहर
नेप्से १४ अंकले वृद्धि, १ अर्ब ४ करोडको कारोबार
ललितपुरमा चिरिबाबुको दोस्रो इनिङ, शपथ समारोहका तस्बिरहरु
२५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय (भिडिओ)
संसद भवनअगाडि जब प्रधानमन्त्रीलाई गाँजाको ब्यानर देखाउन खोजियो
सुमन सायमीको वडामा आँखिझ्यालको अग्रता, पछ्याउँदै लौरो
बालेनको वडामा लौरोलाई दोब्बरभन्दा बढीको अग्रता